Who will be the next CEO for Nepal Tourism Board? | Breaking Travel News
ပင်မစာမျက်နှာ » Breaking ခရီးသွားသတင်းများ » နီပေါကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့၏နောက်ထပ်စီအီးအိုဖြစ်သူမှာမည်သူနည်း။
Deepak Raj Joshi, နီပေါခရီးသွားလာရေးဘုတ်အဖွဲ့ (NTB) ၏လက်ရှိအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် NTB ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်တာ ၀ န်အသစ်ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရန်ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံး ဦး တွင်မပါဝင်နိုင်ပါ။
နီပေါခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့ နီပေါအစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ tourism ခရီးသွားလုပ်ငန်းတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံဖြင့်ပါလီမန်၏လုပ်ရပ်ဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးနီပေါအားဆွဲဆောင်မှုရှိသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုအဖြစ်ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး Ghanashyam Upadhyaya ဦး ဆောင်သောကော်မတီခွဲသည်နီပေါခရီးသွားလာရေးဘုတ်အဖွဲ့ (NTB) တွင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးအတွက်အမည်သုံးခုကိုရွေးချယ်ထားသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြာမီမျှော်လင့်ရသည်။
လျှောက်လွှာတင်သူ ၁၇ ဦး အနက်မှရွေးချယ်ခံရသူစုစုပေါင်းကိုး ဦး အနက်မှယနေ့ဆပ်ကော်မတီသည် Dhananjay Regmi၊ Dipak Bastakoti နှင့် Hikmat Singh Aiyer တို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Dhananjay Regmi ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ဟိမဝန္တာသုတေသနလေ့လာရေး.
Himalayan Research Expeditions (HRE) သည်အစိုးရမှခွင့်ပြုထားသောတောင်တက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသုတေသီများ၊ သဘာဝပညာရှင်များနှင့်စူးစမ်းရှာဖွေသူများအားသီးသန့်တောင်တက်ခြင်းနှင့်သုတေသန ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ သန့်ရှင်းပြီးကျန်းမာသောတောင်တက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအားသုတေသန၊ တောင်တက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပါမစ်များကိုရရှိရန်ကူညီသည်။
Dipak Bastakoti သည်နီပေါနိုင်ငံ၏ကိုယ်ပိုင် guide ည့်လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီး Kathmandu ရှိ 247 ည့်လမ်းညွှန် ၁၀၆၀ အနက်နံပါတ် ၂၄၇ ဖြစ်သည် TourHQ ။ Dipak သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများတွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်စင်ကာပူတွင် ၂ နှစ်ကြာအဝေးပြေးခရီးသွားအမှုဆောင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယ၊ တိဗက်၊ ဘူတန်၊ Srilanka နှင့်နီပေါရှိအပန်းဖြေခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေးနှင့်စွန့်စားမှုခရီးစဉ်များကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ လောလောဆယ် Dipak သည် Kathmandu Nepal တွင်အခြေစိုက်သည့် DJ ၏ Tourism Services ဖြစ်သည်။ DJ's Tourism Services Pvt ။ , Ltd အဖြစ်ကုန်သွယ်နေသည် Trek2himalayas.com ဟိမဝန္တာတောင်တန်း၌အမျိုးမျိုးသောခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုကုမ္ပဏီကလည်ပတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Hikmat Singh က Ayer နီပေါခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့တွင်အကြီးတန်းကော်ပိုရေးရှင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်အထူးတရားရုံးမှအဂတိလိုက်စားမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းမရှိသော်လည်း ပြစ်မှုထင်ရှား သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုအတွက်သန်းနှင့်ချီသောပြည်သူများကိုလျော်ကြေးပေးရန် NTT ၀ န်ထမ်း Subash Nirola, Anil Kumar Das နှင့် Mahendra Khanal ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် Hikmat သည်လန်ဒန်ရှိနီပေါသံရုံးနှင့်အတူဗြိတိန်နိုင်ငံ၌အရေးပါသောအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်မြို့ရှိ Mr. Hikmat Singh Ayer က ဦး တည်ရာအသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်အထူးတင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။